China PETG Mirror factory na suppliers | Donghua
PETG Mirror mpempe akwụkwọ awade vasatail ationgha na ezi mmetụta ike, ezi imewe mgbanwe na ọsọ ka ationgha. Ọ dị mma maka ihe eji egwuri egwu ụmụaka, ihe ịchọ mma, na ihe nlekọta ọfịs.
• Ọ dị na .0098 ″ ka .039 ″ (0.25mm -1.0 mm) thicknesses
• ọnọ na polyfilm masking, agba, akwụkwọ, nrapado ma ọ bụ eyi plastic backcover
Hrie Gmfu PETG Mirror mpempe akwụkwọ, PETG Plastic Mirror mpempe akwụkwọ
PETG enyo mpempe akwụkwọ bụ mpempe akwụkwọ plastik a na-ejikarị arụ ọrụ na injinia, ihe ịchọ mma, ihe nchekwa, na ihe ndị ọzọ dịka ọ na-adị mfe ịmịcha ma belata iji mepụta ụdị mgbagwoju anya na nkọwa zuru oke. PETG enyona-enye a dịgasị iche iche nke uru si elu doo anya, n'elu gloss njigide, enweghị nrụgide whitening, anabata ink na agba, na bụ-FDA-mma maka nri kọntaktị. PETG Mirror mpempe akwụkwọ awade vasatail ationgha na ezi mmetụta ike, ezi imewe mgbanwe na ọsọ ka ationgha. Igwe PETG anyị bụ ezigbo maka ụmụaka ụmụaka, ihe ịchọ mma, na ngwa ọrụ ọfịs. Anyị nwere 0.25 ~ 1 mm ọkpụrụkpụ, 915 * 1830 mm size, doro anya na ọlaọcha na agba maka iji na ịkpụ ka size ọrụ.
Uru PETG Mirror
PETG Mirror mpempe akwụkwọ awade vasatail ationgha na ezi mmetụta ike, ezi imewe mgbanwe na ọsọ ka ationgha.
Igwe PETG dị fechaa ma na-agbanwe agbanwe. Ọ na-enwe mmetụta na-eguzogide ọgwụ ma sie ike karịa iko ọdịnala. PETG mirror na-enye ọtụtụ ụdị uru site na nghọta doro anya, njigide gloss elu, enweghị nrụgide na-acha ọcha, na-anabata ink na agba, yana FDA-kwadoro maka kọntaktị nri. N'ihi ogologo oge nke mpempe akwụkwọ acrylic a, enyo PETG zuru oke maka enyo ụlọ ịsa ahụ, enyo etemeete, na ihe ụmụaka ji egwuri egwu.
Aha ngwaahịa High Gloss PETG Mirror Mpempe akwụkwọ, PETG Plastic Mirror mpempe akwụkwọ
Ihe onwunwe Polyethylene Terephthalate ihe Glycol
Nha 915 * 1830mm, omenala ịkpụ na-size
Ọkpụrụkpụ 0,25 - 1,0 mm
Masking Ihe nkiri PE
Ojiji Plastic mirror mpempe akwụkwọ ngwaahịa
Njirimara Mmetụta na-eguzogide ọgwụ, na-agbanwe agbanwe, Eco-friendly, Child safe
Ngwa 'Smụaka ,mụaka, ihe ntecha, na ihe dị n'ọfịs
Elu na akwụkwọ carft ma ọ bụ ihe nkiri Pee
Njirimara nke anụ ahụ na nke kemịkal
State nke anụ ahụ: Enyo enyo siri ike
Ebe Na-agbaze: Enweghị ya
Isi Okwu: Enweghị ya
Ọnọdụ okpomọkụ: 716 ° F (380 ° C) approx ..
Ebe Flash:> 842 ° F (> 450 ° C)
Auto-mgbanye okpomọkụ: 880 ° F (471 ° C)
Ngbawa mgbawa: Enweghị ya
Edị Evaporation: Enweghị ọdabara
Nsogbu Alụlụ: Enweghị Vapor
Njupụta: Enweghị ike
Ikwu njupụta: 1.27
Solubility: anaghị edozi
PETG mirror akwụkwọ dị mma maka iji mepụta ihe ụmụaka ji egwuri egwu, ngwa ọrụ na ihe ịchọ mma. Ngwa ndị a na-ahụkarị gụnyere:
• Childrenmụaka Tomụaka
• Ngosiputa mma
• Ọfịs Office
• Ubi ogige
• Enyo nchekwa
• Ngosipụta ngwaahịa
• POP Isiokwu
akwụkwọ mpịakọta plastic na-agbanwe
elu gloss petg mirror mpempe akwụkwọ
enyo plastic mpempe akwụkwọ
Petg mirror Ibé akwụkwọ nyagide
petg plastic mirorr mpempe akwụkwọ